Banyere Anyị - NEH Industry & Trade Co., Ltd.
ISPO Munich Jan.26 ka Jan.29, 2020, Mmadụ Bịa ka anyị ụlọ ndò C6.431-6
Acupressure Ohiri Isi
Acupressure echebe Mmadụ
Ntụgharị Uche Products
Ntụgharị Uche fom
Ntụgharị Uche ute
Ntụgharị Uche Set
Back & Olu Support
ịhịa aka n'ahụ hoop
yoga akwa nhicha
Balance Kedo akwa
Yoga nkanka & agbụ
Yoga Socks, akpa & Ndị ọzọ
OMUME & Mma
ịhịa aka n'ahụ Ball
Ịhịa aka n'ahụ ala Stick
A Brief Introduction Of Anyị Team
Anyị na-ele anyị R & D otu dị ka anyị na-emepe emepe ike, anyị na-etinye 10% net uru n'ime R & D, anyị na-ele anya na ahịa na-enyocha ahịa na-emekarị, nke site na a otutu echiche, anyị bulie ụfọdụ na-ekwurịta okwu na anyị ọkachamara ahịa gburugburu ụwa. Ụfọdụ kwetara echiche ga-aghọ imewe osisi, na-ekwurịta okwu ọzọ na ọzọ ......, n'ikpeazụ, ịbịaru na-eme site na anyị R & D otu, The ọzọ bụ ime ka a ikpeazụ sample, Mgbe ahụ, anyị gaa ọzọ step- "rụpụta"
Anyị nwere onwe anyị ụlọ mmepụta ihe na nke rụpụta Hula hoop, Olu na Back support Products, Acupressure Ngwaahịa na Ntụgharị Uche Products na Ningbo, N'otu oge, anyị natara iwu site ahịa anyị, anyị sales onye ga reconfirm niile nkọwa na anyị ahịa. Mgbe ahụ, Ụlọ ọrụ ga-eme ka Nga Production samples factory ga-amalite uka mmepụta mgbe eyi samples na-egosi. factory Nlụpụta ngwongwo bụ dị ka ISO9001 quality management usoro 2008, N'ihi na nkọwa ndị ọzọ banyere anyị àgwà akara, Go nzọụkwụ ọzọ - "àgwà akara"
Anyị àgwà akara usoro ekewa 3 parts- ihe àgwà akara (nnyocha tupu na-aga n'ime ihe onwunwe anyị nkwakọba ma ọ bụ tupu mmepụta), àgwà akara n'oge uka mmepụta na àgwà nnyocha mgbe mmepụta. Anyị àgwà akara bụ isi na ISO9001 quality management usoro, nlele nnyocha bụ dị ka AQL (Ịnakwere Quality Ịgba) 2.5 ụkpụrụ. Anyị QC ga-eme ka nleta na-akọ maka onye ọ bụla iji. Mgbe ahịa ịlele nnyocha akụkọ na enen, Anyị ga-ụgbọ mmiri ngwongwo.
Marketing na Sales
The kasị mma ahịa bụ ịchọta ndị ikpeazụ ahịa 'n'ezie mkpa na-ahụ na-ewu ewu na ngwaahịa na ahịa maka ndị ahịa anyị, anyị ahịa otu na R & D otu na-mgbe na-arụ ọrụ ọnụ na-eme ka otutu ngwaahịa izute ikpeazụ ahịa' mkpa. Anyị sales onye ga-eso na otutu echiche na ngwaahịa si anyị ahịa otu na R & D otu na-asọ ọhụrụ ngwaahịa na-ewu ewu na ngwaahịa na ahịa anyị, anyị na-na-elekwasị anya professionalization na ọrụ spirit, otú ahụ ka anyị na-eji asụsụ ala-eje ozi ahịa anyị . Anyị na-eche a ezi nkwurịta okwu bụ ọkara nke ọma.
Anyị na-ele ọ bụla nnyefe dị ka na-amalite nke a ọhụrụ. Mgbe ibu na ụgbọ mmiri si, Anyị ga-akwadebe niile akwụkwọ maka ndị ahịa ka bulie ngwongwo were were, Inyere ndị ahịa esi bulie ngwongwo ma ọ dị mkpa. Anyị ga-eziga "na-eju afọ ụdị" na ahịa mgbe ọtụtụ ụbọchị. Anyị na-ele "Ahịa mbụ, nsuko mmụọ na kaadị mbụ" dị ka anyị ụkpụrụ isi na Mutual hara nhata, Mutual ùgwù na nkwanyerịta uru.
A nkenke iwebata ụdị
The ika "NEH" e wuru na 2005, The ụkpụrụ iwu a ika "NEH" bụ isi na Natural (Organic), Eco enyi na enyi na Health. The ika "NEH" na-ewe akwụkwọ ozi mbụ si Natural, Eco enyi na enyi na Health. Anyị na-etinye na-chepụta na-eme ka Natural, Eco Enyi na Enyi na ike na ngwaahịa maka anyị ahịa.
The ika "SCMO" bụkwa a ụlọ ọrụ aha, kere ya dị ka China nkà ihe ọmụma nke "Theory ise ọcha" na "Fengshui", SCMO na Chinese bụ "Xun Mu", The okwu "Xun" na Chinese na-na ọ nwere ike na-aga n'ebe nile ụwa na a ozi, anyị ozi bụ enyemaka onye obula ọzọ mma, The okwu "Mu" na Chinese bụ na anyị ga-arụ ọrụ siri ike ma na knowhow ụbọchị ọ bụla, mere SCMO (Xunmu) bụ na anyị ga-arụ ọrụ siri ike ma na knowhow kwa ụbọchị iji nyere ọ bụla ahụ ọzọ mma.
Na mmepe nke sayensị na nkà na ụzụ, The ụwa ghọrọ ọzọ yi na ihe onwunwe ubi karịa tupu, The ihe gbanwere na ọtụtụ ubi, Kasị nke ndị mmadụ nwetara a otutu uru si anụ ahụ n'akụkụ Otú ọ dị, Ọ bụ ahaghị nhata n'etiti anụ ahụ n'akụkụ na uche & mkpụrụ obi n'akụkụ. The ika BESELF e wuru chepụta na ịzụlite yiri ngwaahịa na enyemaka ndị mmadụ na-itule n'etiti anụ ahụ n'akụkụ na uche & mkpụrụ obi n'akụkụ.
Ime Anwansi azụ Nkwado
Na mmepe nke IT, nke gbanwere ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ omume ka ọ nọrọ ruo ogologo time.A ogologo oge iban eweta akpa nsogbu n'ihi na anyị spain, Anyị na-eche ala azụ mgbu na olu mgbu, Nke a-adịghị ala ala mgbu anyị n'ihe ize ndụ ndụ ka mma, anyị na-etinye na enyemaka ndị mmadụ ka mma ha ọnọdụ, nke ahụ bụ ihe mere ika "anwansi azụ support" e wuru na 2011.Now ika "anwansi azụ support" na-aha na China, US na EU
Echiche nke "Eco enyi na enyi" bụ anyị ụkpụrụ chepụta ngwaahịa na-eme ka ndị na ngwaahịa na-ewu anyị na ìgwè ndị agha. Na 2010, e nwere a nri ọgwụ nke nwere akwa akụkụ mmetụta. Anyị ghọtara na e nwere a dị ezigbo mma ohere ka anyị na-asọ anyị kemwepu hula hoop, Ndị mmadụ mgbe niile kwuru na "ifelata, Iji hula hoop", anyị na-dị nnọọ nwetara ihe si na ya, Ya mere, anyị na-wuru ika "Arọ hoop" n'ihi na anyị na hula hoop .Idahaemi arọ hoop na-aha na China, US na EU
A nkenke iwebata anyị otu
Research & Development Anyị na-ele anyị R & D otu dị ka anyị na-emepe emepe ike, Anyị niile na-etinye 10% net uru n'ime R & D, Anyị na-ele anya na ahịa na-enyocha ahịa na-emekarị, nke site na a otutu echiche, Anyị bulie ụfọdụ na-ekwurịta okwu na anyị ọkachamara ahịa gburugburu world.Some kwetara echiche ga-aghọ imewe osisi, na-ekwurịta okwu ọzọ na ọzọ ......, n'ikpeazụ, ịbịaru na-eme site na anyị R & D otu, The ọzọ bụ ime ka a ikpeazụ sample, Mgbe ahụ, anyị gaa ọzọ step- "rụpụta"
Anyị nwere onwe anyị ụlọ mmepụta ihe na nke rụpụta Hula hoop, Olu na Back support Products, Acupressure Ngwaahịa na Ntụgharị Uche Products na Ningbo, N'otu oge, anyị natara iwu site ahịa anyị, anyị sales onye ga reconfirm niile nkọwa na ndị ahịa anyị, Mgbe ahụ, Ụlọ ọrụ ga- ka Nga Production samples factory ga-amalite uka mmepụta mgbe eyi samples na-egosi. factory Nlụpụta ngwongwo bụ dị ka ISO9001 quality management usoro 2008, N'ihi na nkọwa ndị ọzọ banyere anyị àgwà akara, Go nzọụkwụ ọzọ - "àgwà akara"
FAQ nke ụlọ ọrụ
Gịnị bụ gị isi ngwaahịa & ahịa?
Anyị isi na ngwaahịa ndị hula hoop, acupressure ute, lumbar ọgwụ na ngwá na-atụgharị uche fom. Anyị nwere afọ 10 'ahụmahụ n'ichepụta na exporting ndị a na ngwaahịa. Ngwaahịa na ọrụ anyị na-tụkwasịrị obi site ahịa si Europe, North America, Oceania na South Korea, na-tumadi na-ụlọ ahịa oru, ọkachamara purchasers na mma na ahụ ike na ubi, na Amazon Shopkeepers.
Gịnị bụ nke kacha nta nke ukwu na m nwere ike ịtụ?
MOQ-adabere na ihe ngwaahịa na ị na-nwere mmasi. Nọmalị, 50-100pcs / kwa agba maka anyị isi ngwaahịa bụ irè, ma ọ bụrụ na gị na customization zuru ezu na-adịghị mgbagwoju anya. Anyị ga na-agbalị kasị mma anyị na-akwado anyị na ahịa maka ibe uru.
Olee ụdị nkwakọ ime ị na-enye & ike anyị hazie?
Standard nkwakọ bụ labelụ + ntụziaka ntuziaka + agba igbe (ma ọ bụ mail igbe) + katọn igbe. Ọ nwere ike ịbụ ọzọ dabeere na gị chọrọ. Anyị ọkachamara mmebe ga-enye ọtụtụ nhọrọ na echiche ọhụrụ banyere nkwakọ.
Nwere ike ị na-enye a katalọgụ nke gị niile na ngwaahịa?
Ee. Anyị nwere catalogs nke isi ngwaahịa iche iche. Anyị nwere obi ụtọ iji zitere gị ndị catalogs na PDF ma ọ bụ picture format site e-mail ma ọ bụ na-elekọta mmadụ ngwa.
Ị na-enye ihe ntụziaka ntuziaka nke otú e si eji ngwaahịa?
Ee. Anyị nwere ike na-enye otu instrucion ntuziaka na ozi nke ya ọrụ, ojiji, na-eme na don'ts nile anyị na ngwaahịa.
Anyị pụrụ ịtụ otu ma ọ bụ ụfọdụ ahaziri na agba?
Ee. Anyị nwere ụfọdụ na agba na-ahọpụta na ga-egosi gị nhọrọ. Anyị nwekwara ike ahaziri a ọhụrụ agba maka ị. Dị nnọọ na-agwa anyị na Pantone nọmba ma ọ bụ na-eziga anyị a na agba sample.
Gịnị bụ sample-eri?
Anyị nwere obi ụtọ na-enye otu free mgbe sample n'ihi na ị mgbe ị kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ maka ibu na ndị ọzọ n'omume. Ihe mmezi ego ga-maka a ahaziri sample n'ihi na anyị nwere na-eme ka ụdị osisi nke ígwè obibi akwụkwọ. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site PayPal ma ọ bụ na Chinese nanị AliPay na WeChatPay. Dị ka nnyefe oge, biko chọta mpempe akwụkwọ n'okpuru.
Mbupu ebe Oge nzipu awara awara
North America 2 ~ 3days
Anyị na-achọ a GOTS gbaara ekpere kwushin, unu nwere ya?
Ee. Anyị na-atụgharị uche fom gafere GOTS asambodo. All anyị ngwaahịa na-mere site nontoxic ihe onwunwe. N'ihi na ihe niile asambodo ọmụma biko chọta mpempe akwụkwọ n'okpuru.
ozi nyere ikike asambodo patent
anyị factory GOTS, BSCI, ISO9000
anyị na ngwaahịa hula hoop OA, iru, RoHS, AZO, EN71,6P ee
acupressure ute OA, RoHS, EN957, iru ee
anwansi azụ support OA ee
na-atụgharị uche fom RoHS, EN71, GOTS
Olee otú ogologo bụ mmepụta oge na mbupu oge maka onye ọ bụla iji?
Anyị emelitere anyị akpaka mmepụta akara maka hula hoop na acupressure ute nke n'ike n'ike ebelatakwa oge mmepụta oge 15 ụbọchị maka otu 40HQ akpa. N'ihi na ndị ọzọ na ngwaahịa ọkọlọtọ mmepụta ụzọ oge bụ banyere ụbọchị 20.
Destination mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Oge nzipu site n'oké osimiri
North America 30 ~ 50days
Gịnị bụ gị ụgwọ okwu?
Anyị kwesịrị ugwo okwu bụ T / T 30% dị ka ego, 70% megide B / L akwụkwọ.
Ị na-enye ihe ọ bụla ọzọ ozi?
Anyị nwere ọkachamara na omiiko foto otu na a nnukwu photostudio na elu equipments nke na-enyere na-enye na-akwado ọrụ dị ka elu ngwọta advertisement photo, nlereanya foto na video na ahịa.
Kpọtụrụ anyị banyere a azụmahịa ma ọ bụ ngwaahịa na na-kpọmkwem haziri maka gị! kpọtụrụ anyị
NEH (Ningbo) ụlọ ọrụ & ahia CO., LTD.
Ụlọ ọrụ: 1502, Ningshing Building, 666 Jiangnan Rd, Yinzhou District, Ningbo, China
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe: No.13, Xinheng Yi Rd, Private Industry Mpaghara, Jiangbei District, Ningbo, China
© Copyright - 2009-2020: All Rights echekwabara.